Kenya oo ogalaatey in dib loo bilaabo duulimaadad caalamiga ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kenya oo ogalaatey in dib loo bilaabo duulimaadad caalamiga ah
Kenya oo ogalaatey in dib loo bilaabo duulimaadad caalamiga ah
Kenya ayaa Sabtidii u oggolaatay duullimaadyada caalamiga ah inay ku soo degto garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta (JKIA) iyadoo kuwa kale ay ka dhoofeen dalka, qiyaastii afar bilood ka dib markii ay dowladdu mamnuucday safarka aan caadiga ahayn ee socdaalka ah ee lagu doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka COVID-19.
Dib u soo celinta duulimaadyadeedii ayaa imanaya iyada oo waddanku uu ku soo kordhayay isbeddello joogto ah oo ku yimaadda cudurrada maalinlaha ah ee cusub bishii la soo dhaafay, taas oo ku kaliftay kiiskeeda mid dhaafsiisan sumcadda 20,000.
Dalka Bariga Afrika wuxuu ka mid yahay toddobo dal oo Afrikaan ah oo tiradaas ku dhuftay tiradaas.
Borotokoolno caafimaad oo kala duwan ayaa la dhigay dadaallada lagu hubinayo badbaadada rakaabka iyo shaqaalaha, oo ay ku jiraan shuruudo looga soo saarayo natiijada tijaabada COVID-19 ee xun, xiisaha waji-xidhka iyo jahawareerka bulshada ee garoonka diyaaradaha.
Markii ay duullimaadyada caalamiga ahi soo degeen oo ka duuleen JKIA, ayay dawladda Kenya beenisay wararka sheegaya in ay xumaysay xiriirkii ay la lahayd Tansaaniya iyada oo diideysa xuquuqda hawada ee Tansaaniya ay ku duuleyso dalka.
Xoghayaha guud ee Arimaha Dibadda Ababu Namwamba ayaa yiri “Waxaan rabaa inaan cadeeyo in xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Tansaaniya uu yahay mid aan la arki karin, lama huraan ahayn, waa wax inala jira,”
Duulimaadyadii gudaha ee Kenya ayaa dib u bilaabay 15kii Luulyo ka dib markii ay dawladdu ka aamusisay tallaabooyin xiritaan oo meesha ka jiray illaa dhammaadkii Maarso.
Previous articleCaajisku Waxa Uu Jecel Yahay Fasax Shaqada!
Next article𝗦𝗢𝗖𝗢𝗗𝗦𝗜𝗜 𝗖𝗔𝗟𝗢𝗢𝗦𝗛𝗔𝗔𝗗𝗔 𝗔𝗗𝗜𝗚𝗔 𝗢𝗢 𝗚𝗨𝗥𝗜𝗚𝗔𝗔𝗗𝗔 𝗝𝗢𝗢𝗚𝗔
ciidanka booliska somaliland oo soo xidhan gabadhii inanta yar muuqaalka ka...
Madaxweyne Farmaajo oo Addis Ababa kula kulmay Ra’iisul-wasaaraha Norway “SAWIRRO”